စပိန်နိုင်ငံတွင် Facebook နှင့် WhatsApp ဒဏ်ငွေယူရို ၆၀၀,၀၀၀ ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည် Androidsis
Facebook နှင့် WhatsApp အတူတကွစုစည်းပြီးကတည်းကအာဏာပိုင်များကသူတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်နှစ်များလုံးသည်၎င်းတို့၏ဆာဗာများကိုစည်းလုံးစေမည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်မထူးခြားပုံရသည် အသုံးပြုသူဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး.
ထိုကွောငျ့, Facebook နှင့် WhatsApp နှစ်ခုလုံးကိုစပိန်တွင်ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးသည်ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းစွပ်စွဲခံရသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှဒဏ်ငွေကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယူရို ၆၀၀,၀၀၀ လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်.
စပိန်ဒေတာကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီအနေဖြင့် Facebook နှင့် WhatsApp နှစ်မျိုးလုံးသည်အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအော်ဂဲနစ်ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်။ ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်ခဲ့ဟုယူဆသည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးမှပြုလုပ်သောချိုးဖောက်မှုများသည်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဒဏ်ငွေ ၃၀၀,၀၀၀ အထိပေးဆောင်နိုင်သည်။ ဒါကနောက်ဆုံးမှာအစိုးရကဒဏ်ငွေဖြစ်ပါတယ်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် WhatsApp သည်၎င်း၏သုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ပေးပို့ခြင်းအတွက်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သူတို့၏သဘောတူညီချက်ကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပဲဤအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်သည်။ လူမှုကွန်ယက်၏အမှု၌နေစဉ်, ဒဏ်ငွေအဘို့အလာပါတယ် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောဒေတာကိုသုံးပါ, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနောက်တဖန်။
ထို့အပြင်စပိန်ဒေတာကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီက၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် အသုံးပြုသူများသည်လျှောက်လွှာများကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးအနှုန်းအသစ်များကိုလက်ခံရန်တာဝန်ရှိသည်။ အသုံးပြုသူသည်လက်မခံလျှင်၎င်းသည်လျှောက်လွှာနှစ်မျိုးလုံးကို ဆက်လက်၍ အသုံးပြု၍ မရပါ။ သေချာသည်မှာအငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုကွောငျ့, အေဂျင်စီကဤဝေါဟာရများကိုလက်ခံ၏အတည်ပြုချက်ကိုမမှန်ကြောင်းစဉ်းစားသည်။ ထို့အပြင်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်အကောင့်အသစ်ဖွင့်လှစ်ထားသောအသုံးပြုသူများကိုစင်မြင့်ပေါ်တွင်အကောင့်ရှိပြီးသားအသုံးပြုသူများနှင့်ထပ်မံအသိပေးခြင်းမရှိပါ။
ဤဒဏ်ငွေများသည် Facebook နှင့် WhatsApp အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုသိရှိရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လိမ့်မည် နှင့်သူတို့၏သရုပ်ဆောင်လမ်းအတွက်ပြောင်းလဲမှုရှိလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » WhatsApp နှင့် Facebook သည်ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဒဏ်ငွေချမှတ်ခံခဲ့ရသည်